म आइजीको जागिरमात्र खान्नँ : महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल खनाल « Naya Bato
म आइजीको जागिरमात्र खान्नँ : महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल खनाल
नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँग सेतोपाटीका प्रकाश ढुंगाना र अशेष अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नागरिकसँग हरेक दिन प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको जिम्मेवारीलाई कसरी लिनु भएको छ?
मुलुकको अहम् जिम्मेवारी र गहन दायित्व बोकेको संगठनको प्रमुख हुँदा अझ बढी जिम्मेवारीबोध भएको छ। अब प्रहरी कर्मचारीसँगै नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, विभिन्न निकाय र नागरिकसँग समन्वय गरी अघि बढ्नु पर्ने भएको छ।
जिम्मेवारी बहन गर्दा काँधमा नेपाली नागरिकको सुरक्षा राखेर गुण्स्तरीय सेवा प्रदान गर्छु भन्ने विश्वास छ।
देश नयाँ संरचनामा गएकाले हाम्रासामू पनि केही चुनौती छन्। नयाँ संरचनाअनुसार कार्यविधि बनाएर नेपाल प्रहरीलाई पनि सोही संरचनामा लैजानु पर्नेछ। असहज परिस्थिति आउन नदिने वातावरण निर्माण गर्नु पर्नेछ। यसमा अलि बढी सजगताको खाँचो छ।
तपाईं प्रहरी प्रमुख भएपछि संगठनभित्र र आमनागरिकले के फरक अनुभूति गर्न पाउँछन्?
अहिले मुलुकमा ऐतिहासिक परिस्थिति निर्माण भएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीज्यूसम्मको स्पष्ट दृष्टिकोण आएको छ। सरकार ‘सम्मृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा अघि बढेको छ।
गृह संरचना सुधारअन्तर्गत आएको ८२ बुँदेमा नगरी नहुने केही काम छन्। तिनलाई पूरा गर्छु। त्यसले प्रहरी संगठनमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
नागरिकले अहिले उच्च गुणस्तरको प्रहरी संगठन खोजेका छन्। म देशको आवश्यकता अनुसारको प्रहरी संगठन बनाउन प्रयास गर्नेछु।
अहिले काम गर्न वातावरण छ, सरकारको स्पष्ट निर्देशन पनि आएको छ। मेरो आफ्नो चाहना पनि त्यही अनुसारको छ। म परिणाम उन्मुख नतिजा ल्याउने पक्षमा छु।
प्रहरीलाई काम गर्दा राजनीतिक दबाब पनि आइरहन्छ। पहिला काम गर्दा यहाँले त्यस्ता दबाबलाई पाखा लगाउनुहुन्थ्यो भनिन्छ। अब पनि यस्ता दबाबलाई पाखा लगाएरै काम गर्नुहुन्छ कि, सम्झौता गर्नुहुन्छ? किनकी आइजी नियुक्ति आफैंमा राजनीतिक निर्णय हो।
विगतमा काम गर्दा राजनीतिक दबाबहरू आउँथे। अहिले सरकार प्रमुखबाट प्रष्ट रूपमा न्यायसंगत, दृढताका साथ र दायाँबायाँ जाने ठाउँ छैन भन्ने कुरा आएकोले त्यो असहज परिस्थिति हुन्छ भन्ने मलाई छँदै छैन्। विगतमा जुन किसिमका कुरा भए त्यसलाई पनि पार गरेर आइयो। व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि नेपाल सरकारले अख्तियार गरेका नीतिलाई मान्नैपर्छ। त्यो अनडयू फ्रेस हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा पनि गरेको छैन्। सरकारका नीतिलाई सहयोग गर्नेमा म पुर्णरूपमा कटिबद्द छु र गर्छु पनि। बाँकी रह्यो कुनै अनुसन्धानलाई नचाहिदो प्रभाव पार्ने, दख्खल पार्ने प्रकारका कुरालाई जोगाउने कुरा हुँदैन्। विगतमा आफ्नो क्षमतामा भएका कुरा हुँदा पनि गरिएको थिएन। संगठन प्रमुखको हैसियतले स्पष्ट दिशाबोध छ।
तल्लो दर्जामा रहेर १०-१२ वर्षदेखि काम गरिरहेकाहरूको बढुवा हुन सकेको छैन। त्यस्ता प्रहरीहरूलाई केही गर्ने योजना बनाउनु भएको छ?
सबैभन्दा बढी योजना चाहिने भनेकै प्रहरी जवान र हब्लदारहरूका लागि हो, जो फिल्डमा खटिन्छन्। नेतृत्व तहमा रहेर माथिमाथिको मात्र नहेरी तल काम गर्ने ती प्रहरीमा केन्द्रित छु। किनभने बुट बजारेर परिवार नभनी दिनरात खट्ने समूह ठूलो छ, त्यसलाई मुटुमा राखेर काम गर्छु ।
आफ्ना मान्छेलाई रिझाउन बनाइएका प्रहरीका पदहरू खारेज हुन्छन्?
पदहरू विवेकसम्मत हुनुपर्छ। म भर्खर आएको छु हचुवाका भरमा थपिएका पद छन् भने त्यसलाई म हेर्दैछु। प्रहरी कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म गृह मन्त्रालयसँग रा
‘भारत पिठ्यु कन्याएर आन्द्रा खाने ब्वाँसो जस्तै हो, अरुण खाना आउँदैछन मोदी’ चित्र बहादुर केसी
म बचाउँछु डा. उपेन्द्र देवकोटालाई – सुवास सुब्बा
सुन तस्करी बारे पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा
‘मागेर देश समृद्ध हुँदैन, भागेर समस्या समाधान हुँदैन’ : लालबाबु पण्डित
जहाज दुर्घटना हुनुपुर्व प्रत्यक्षदर्शीको बयान: जब जहाज तलबाट आयो ढुकढुकी बढ्यो